2013-08-11 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
IN Photoshop - ON Saturday, August 17, 2013 No comments
ကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 4.4 MB ပဲ ရှိပါတယ်.
Ful Version ဖြစ်ဖိုအတွတ်ဒေါင်းလော့ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ Mail Address နဲ့ Registration Key ထဲပေး
IN PC games - ON Saturday, August 17, 2013 1 comment
IN Video Editing - ON Friday, August 16, 2013 No comments
IN Downloader - ON Friday, August 16, 2013 No comments
IN Hacking Tools - ON Friday, August 16, 2013 No comments
Pointstone System Cleaner 7.3.6.320 Full With Patch
IN Optimizer - ON Thursday, August 15, 2013 No comments
Pointstone System Cleaner 7.3.6.320 (Size : 11 Mb)
IN Screen Capture - ON Thursday, August 15, 2013 No comments
မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာ Desktop မှာ ပေါ်နေတဲ့ ပုံတွေကို မောက်စ်မျှားလေးပါ ပါအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ယူလို့ရတဲ့ HyperSnap 7.25.03 Final နောက်ဆုံးထွက် လေးပါ..။ အညွှန်းမျှားတွေထည့်ပြီး၊ ပုံတွေ
ကို Effect မျိုးစုံနဲ့ သပ်ရပ်လှပအောင် ပြုပြင်ဖန်တီးယူလို့ ရပါတယ်..ဒီကောင်လေးကို ဖူးသုံးလို့ရအောင် key ဖိုင်လေး၂ခု ထည့်ပေးထားပါတယ်..။ Key ဖိုင်၂-ခုထဲက တခုကို ၂ချက်တောက်ပေးလိုက်ရင်ဖူးသုံး
လို့ ရသွားပါပြီ..။ Effect တွေများလွန်းတဲ့အတွက် အားလုံးကို အသုံးပြုတတ်ဖို့ကိုတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်
ပဲ လေ့လာရမှာပါ..။ ဒီကောင်လေးကိုလိုအပ်တဲ့သူများကတော့ အောက်ကလင့်ကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ
ဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 12 MB ရှိပါတယ်..။
IN Dictionary - ON Thursday, August 15, 2013 No comments
IN USB - ON Thursday, August 15, 2013 No comments
USBFlashCopy 1.8ဆိုတဲ့ Software လေးက မိမိရဲ့ USB Flash Drive ထဲက Data တွေကို အလိုအလျောက် Backup လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် USB Flash တစ်မျိုးမျိုးကို PC နဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်
တာနဲ့ အလိုအလျောက် Backup လုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်..လိုအပ်သူများဒေါင်းလော့နိုင်ပါပြီ...
IN Burning, Utilities - ON Wednesday, August 14, 2013 1 comment
WinISO Standard 6.3.0.4969 | 6.8 MB
It can be used as an extraordinary ISO Converter
It is an easy-to-use bootable ISO Maker
WinISO Standard 6.3.0.4969 (Updated on: Aug. 12th, 2013)
Optimized the Windows 8.1 preview compatibility.
Added new feature: preview pictures while editing the disc image files
IN Photo and Media Editor Tools - ON Wednesday, August 14, 2013 No comments
Ashampoo Music Studio 4.1.0.16 | 38.6 MB
Ashampoo Music Studio 4.1.0.16 ဟာ Burning, Converting,Editing, Extracting
စတာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် အရည်အသွေးပြည့်စုံကောင်းမွန်သော Multimedia
Ashampoo Music Studio is your all-in-one solution to create, edit, design and produce your music. Ashampoo Music Studio4covers the entire workflow from music creation to production.Supported audio formats: FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA
DVDFab 9.0.5.5 final and 9.0.5.7 Beta Full With Crack
IN Burning, Photo and Media Editor Tools - ON Wednesday, August 14, 2013 No comments
DVDFab 9.0.5.5 final and 9.0.5.7 Beta | 88 MB
ဒါလေးကDVD copy & DVD Ripper & Blu-ray Copy & Blu-ray Ripper (3D Plus) & Blu-ray
to DVD & Video Converter & 2D to 3D Converter & DVD Creator & Blu-ray Creator & File Transfer & HD Decrypter စသဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်..လိုအပ်သူများအောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်
ကြပါ။ အခု ဗားရှင်း 9.0.5.5 Final ကော 9.0.5.7 Beta ကောနှစ်ခုလုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Full
Version အတွတ်ကတော့ crack ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ သွင်းနည်းကတော့ အရင် ဆုံး DVDFab9055.exe ကို install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် 32 bit အသုံးပြုသူများအတွက် C:\_Program Files\_DVDFab9သို့မဟုတ် 64 bit အသုံးပြုသူများအတွက် C:\_Program Files (x86)\_DVDFab
9 သွားပါ။ ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ထဲက msvcr90.dll ကို copy ကူးလိုက်ပါ။ ပြီး ရင် C:\_Program Files (x86)\_DVDFab9or C:\_Program Files\_DVDFab9သွားပြီး paste လုပ်လိုက်ပါ။ Copy and
Replace ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။အဲဒါဆိုဖူးဗားရှင်းဖြစ်သွားပါမယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့နှစ်ခုပေါင်း 88 MB ရှိပါ
Changes in 9.0.5.7 Beta:
Ashampoo Movie Studio | 162.9 MB
Ashampoo Movie Studio 1.0.4.4 ဟာ Movie တွေကိုဖြတ်ညှပ်ကတ် လုပ်တာ၊ Transition Effects ထည့်တာ၊ စာတန်းထိုးတာ၊ Background Music ထည့်တာ၊ Size လျှော့ချတာ၊မကြည့်ချင်တဲ့ကြေငြာတွေ
ကိုဖြတ်ထုတ်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်.Movie တွေကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ချင်သူများ အတွက် နံမည်ကြီး Ashampoo Movie Studio 1.0.4.4 တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အသုံးပြုရတာလွယ်ကူသလိုဆိုဒ်အရွယ်အစား
သေးငယ် ပေါ့ပါးခြင်း လိုအပ်သော Effect, Tools တွေစုံလင်ခြင်းက သူ့ကို နာမည်ကြီးစေတဲ့အချက်တွေ
ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်အောက်မှာ ယူလိုက်ကြပါဗျာ။
Download >>> solidfiles (or) tusfiles
Making and editing home movies as it should be
Any computer that runs the above operating systems at reasonable speed.
1280 x 1024 min. resolution
DirectX9capable GPU with hardware pixel shader v2.0 and 128 MB RAM
Any standard card, internal or external
230 MB free disk space for program installation
1 GB free disk space for cache additional space for temporary files
SUPERAntiSpyware Professional 5.6.1030 Full With Keygen
IN Antivirus - ON Tuesday, August 13, 2013 No comments
SUPERAntiSpyware Professional | 25.8 MB
SUPERAntiSpyware Professional 5.6.1030 ဟာကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့
တွေနဲ့အခြား Threats တွေအားလုံးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထောက်လှမ်းဖေါ်ထုတ်ပြီးအပြတ် ရှင်းလင်းပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်အဲဒီကောင်တွေကြောင့် Registry Editor ,
သွားတဲ့System တွေကိုလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် SUPERAnti
Spyware latest version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် full version အတွက် keygen